Shacabka Puntland | Archive | WARARKA CAALAMKA	Monday, February 20th, 2017	Home
Shiinaha oo diiday inuu ka iibsado dhuxusha Kuuriya Woqooyi
- Feb 19, 2017	Shiinaha ayaa ku dhawaaqay inuu hakinayo dhammaan waxyaabaha looga keeno Kuuriyada Waqooyi.
Ujeedada ayaa ah in xukuumadda Pyongyang cadaadis la saaro, ka dib markii gantaal ay tijaaabisay. Waxyaabaha Shiinaha uu joojinayo ...	Norway oo 7 Million Dollar ugu deeqday Abaaraha Somalia.
Wasiirka Arrimaha dibada Norway Børge Brende ayaa sheegay in dowladdiisu 7 Million ...	Shirkada Nokia oo sheegtay in ay soo celinayso Taleefankii Caanka noqday ee 3310.
- Feb 19, 2017	Shirkada Nokia waxay sheegtay in ay soo celinayso Taleefankii caanka noqday ee 3310, iyadoo tixgelinaysa codsi ka yimid macaamiisheeda.
Masuul katirsan Nokia waxaa uu sheegay in ay tani fursad u tahay ...	Sweden oo la yaaban hadal ka soo yeeray Donald Trump.
- Feb 19, 2017	Kadib afar todobaad oo ka soo wareegay markii uu xilka la wareegay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayuu dib ugu noqdey ol-olihiisi waxaana uu isu soo bax ku qabtey Melbourne oo ...	Museveni oo Difaacay Donald Trump asagoo cambaareyna u diray Dalalka Reer Galbeedka.
- Feb 18, 2017	Madaxweynaha Ugandha Yuweri Musefeni ayaa Qoraal dheer oo uu shalay soo saaray ku difaacay Madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump isla markaana cambaareyn kulul la beegsaday dalalka Reer Galbeedka ee ...	Howlgal Amni oo ka bilowday Dalka Pakistan ka dib Qaraxii 72 qof lagu dilay.
- Feb 18, 2017	Dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay dagaalyahanno mintidiin ah ku dishay howlgal ay fulisay ka dib weerarkii 72-da qof lagu dilay.
Ururka Daacish ayaa weerar ku qaaday boqollaal qof oo ku sugnaa ...	Daawo USA: Trump oo caradiisa kala dul dhacay Saxaafada – (VIDEO).
- Feb 17, 2017	Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo todobaadyadii lasoo dhaafay isa soo tareysay shakiga laga qabo xiriirka ka dhaxeeyey xubnaha la shaqeeya isaga iyo Dowlada Ruushka ayaa shir jaraa’iid oo uu qabtay ...	72 qof oo ku dhimatay Qarax ka dhacay Dalka Pakistan.
- Feb 17, 2017	Inta la xaqiijiyay 72 ruux ayaa ku dhimatay qarax uu fuliyay qof is miidaamiye ah oo ka dhacay masaajid caan ah oo ku yaalla Koonfurta Pakistan, sida laga soo xigtay ...	Next Page »	Click here to add Widgets	FARSAMADII KALAFOGE